”Dagaalka Ukraine wuxuu muujiyey munaafaqnimada caalamka!” – Turkiga oo ku dhega hadlay reer Galbeedka | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Dagaalka Ukraine wuxuu muujiyey munaafaqnimada caalamka!” – Turkiga oo ku dhega hadlay...
”Dagaalka Ukraine wuxuu muujiyey munaafaqnimada caalamka!” – Turkiga oo ku dhega hadlay reer Galbeedka
(Islamabad) 22 Maarso 2022 – Dagaalka ka socda Ukraine ayaa dahaarka sare ka qaaday laba-wejiilaynta beesha caalamka ah, sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Dibedda Turkiga, Mevlüt Çavuşoğlu Talaadadan.
Isagoo ka hadlayay shirka 48-aad ee Wasiirrada Arrimaha Dibedda ee Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) ee ka socda caasimadda Pakistan ee Islamabad, Çavuşoğlu ayaa yiri: “Waxaan maqalnay kuwa leh ‘Halkani maaha Bariga Dhexe, halkani maaha Afgaanistaan, maxaa dhiigga dadkan loo daadiyey? ‘ Annaga, dhiigga ku daatay Kharkiv iyo dhiigga ku daadanaya Xalab waa inoo siman yihiin.”
Diblomaasiga ugu sarreeya Turkiga ayaa sidoo kale ku celceliyay in loo baahan yahay in la qaato mawqif midaysan oo ka dhan ah caqabadaha haysta dunida Muslimka. “Mawduuca kulankeenu waa ‘Iskaashiga Midnimada, Cadaaladda iyo Horumarinta. Mawduucani waa in aanu noqon halkudheg oo kaliya, ee waa in lagu buuxiyaa tillaabooyin la taaban karo, sababtoo ah waxa aan liibaanaynaa marka aan midowno” ayuu yiri Çavuşoğlu.
Wuxuu sidoo kale ugu baaqay dunida Muslimka in ay wax is waydiiyaan. “Dhaqanka, fanka, ilbaxnimada, cilmiga iyo xikmadda Islaamka ee 14 qarni kahor jirtey ayaa la sugayaa in dib loo soo nooleeyo, xarumihii qadiimiga ahaa ee ilbaxnimodeenna, sida Quddus, Dimishiq, Xalab iyo Kaabul waa la burburiyay, magacyadoodana waa la waayey, magacyada wadamo badan oo Islaam ihi waxay noqdeen kuwo lala xiriiriyo dagaal, argagax, dhibaato iyo xasuuq,” ayuu yiri Çavuşoğlu.
“Xuquuqda aasaasiga ah ee walaalaha ku nool Kashmiir waa lagu xadgudbayaa, Islaam nacaybka Yurub wuu sii kordhayaa. Dalka Shiinaha, waxaa ku soo badanaya in dadka Muslimiinta ah ee Uyghur-Turkiga ah iyo Muslimiinta kale loo diido inay ilaashadaan xuquuqdooda diineed iyo dhaqankooda. Madax daboolka waa laga mamnuucay Hindiya, oo ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin Muslimiinta ugu badan caalamka. Xasuuqa Rohingya hadda cidiba kama hadasho. Dhiigga walaalaha ayaa weli ku qulqulaya Liibiya, Suuriya iyo Yemen.” ayuu ku qayliyey Çavuşoğlu oo ururka OIC usoo jeediyey inay cod guud u noqdaan qaddiyaadka Islaamka.
Previous articleAskari Ruush ah oo taangigii uu kaxaynayey ka iibsadey Ciidamada Ukraine (Lacagta uu siistay & mid loo ballanqaaday qofkii diyaarad keena)
Next articleLafta-gareen: Ficilkiisa, fahankiisa iyo faankiisa ayaa isburinaya